Garcilaso de la Vega. 5zọ XNUMX kachasị mma iji cheta ya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Garcilaso de la Vega, nnukwu onye na-ede uri Spanish Renaissance, nwụrụ n'ụbọchị dịka taa na 1536 na Nice. Ndụ ya, jupụtara agha na aghụghọ na rụzuru, sọọ mpi na a ụkọ ma isi ọrụ n'asụsụ Spanish. Na ncheta ya ka m na-azọpụta 5 nke sonnets icheta ya.
2.1 Sonnet V - Edere mmegharị ahụ gị na mkpụrụ obi m
2.2 Sonnet XIII - Aka Daphne na-eto eto
2.3 Sonnet IX - Nwanyị m, ọ bụrụ na anọghị m gị ...
2.4 Sonnet VII - Onye tufuru ọtụtụ ihe tufuru ọzọ ...
2.5 Sonnet XIV - Dị ka nne dị nro, na nhụjuanya ...
Amụrụ n’ime Toledo, n'obi onye ezinụlọ Castilian a ma ama. Site na mgbe ọ dị obere ọ sonyere na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Castile ruo na 1510 ọ banyere n’ụlọ eze Eze Charles nke Mbụ. O sonyere n'ọtụtụ agha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma sonye na njem na Rhodes, na 1522, tinyere Juan Boscan, onye ọ bụ ezigbo enyi ya. N’afọ 1523, a họpụtara ya onye isi nke Santiago na, afọ ole na ole mgbe e mesịrị, ọ kwagara na Carlos I ka Bologna ebe emere ya eze.
Ọ tara ahụhụ na mba ọzọ wee gaa Naples, ebe ọ nọrọ. Otú ọ dị, na mwakpo ahụ e wusiri ike nke Muy, na French Provence, ọ bụ nwuru anwu na agha. Mgbe ebughara ya Mma nwụrụ n’ebe ahụ n’ụbọchị dị ka taa 1536.
Obere ọrụ ya nke echekwabara, edere tinye 1526 y 1535, bụ nke e bipụtara n'otu ụzọ mbubreyo ya na nke Juan Boscán n'okpuru aha nke Ọrụ nke Boscán ya na ụfọdụ nke Garcilaso de la Vega. Akwụkwọ a wepụtara Akwụkwọ edemede Renaissance na Akwụkwọ Ozi Spanish. Enwere ike ịhụ mmetụta nke ndị odee Italiantali na metrics n'ezoghị ọnụ na ọrụ ya niile na Garcilaso hazigharịrị ha na mita Castilian nwere ezigbo nsonaazụ.
Banyere ọdịnaya, ọtụtụ abụ ya gosipụtara nnukwu ahuhu nke Garcilaso dere maka nwanyị Portuguese Isabel freyre. Ọ zutere ya n'ụlọ ikpe na 1526 na ọnwụ ya na 1533 metụtara ya nke ukwuu.
M na-ahọrọ ndị a 5 sonnet n'ime 40 ndị dere, na mgbakwunye 3 elekere.
Sonnet V - Edere mmegharị ahụ gị na mkpụrụ obi m
Edere ngosipụta gị na mkpụrụ obi m,
na ole ka m choro ide banyere gi;
ọ bụ gị dere ya, agụrụ m ya
naanị ya, naanị na gị onwe gị ka m debere na nke a.
N’ime nke a ka m nọ na mgbe nile;
na ọ bụ ezie na ọ dabaghị na m ole m hụrụ n'ime gị,
nke ọma nke ukwuu ihe m na-aghọtaghị m chere,
na-ewere okwukwe maka mmefu ego.
Amughi m ma obughi ka m hu gi n'anya;
nkpuru-obim ekewaala gi dika ọtùtù-ya;
site na-emebi mkpụrụ obi n'onwe ya ka m hụrụ gị n'anya.
Ego ole ka m nwere ekwupụta m ji gị;
Amụrụ m maka gị, enwere gị ndụ,
n'ihi gị, m ga-anwụ n'ihi gị, m ga-anwụ n'ihi gị.
Sonnet XIII - Aka Daphne na-eto eto
Aka Daphne amaliteworị na-eto eto,
na ogologo okirikiri ùkwù ka o gosipụtara onwe ya;
na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ m hụrụ na ha ghọrọ
ntutu nke ọlaedo gbara ọchịchịrị.
Ha jiri osisi siri ike kpuchie
akụkụ ahụ dị nro, ka na-agba esi, bụ:
ụkwụ ọcha dị n'ala wee daa,
ha wee ghọọ mgbọrọgwụ gbagọrọ agbagọ.
Onye kpatara nsogbu dị otu a,
site na akwa ákwá, m tolitere
osisi a nke gbara anya mmiri.
Ọnọdụ obi ọjọọ! Oh ọjọọ size!
Na ibe akwa na-etolite kwa ụbọchị
ihe mere na ihe kpatara o ji bee akwa!
Sonnet IX - Nwanyị m, ọ bụrụ na anọghị m gị ...
Nwanyị m, ọ bụrụ na anọghị m ebe a
n'ime ndụ a siri ike ma anaghị m anwụ,
ọ dị m ka m mejọrọ ihe m hụrụ gị n'anya,
ye eti n̄kpọ emi enye ekenemde ndidụk;
mgbe nke a gasịrị, enwere m mmetụta mberede ọzọ,
nke bụ ịhụ na ọ bụrụ na m nwere obi nkoropụ nke ndụ,
Atụfuru m ezi ihe m tụrụ anya n’aka gị;
Ya mere, m na-eje ije na mmetụta m dị iche.
Ke ukpụhọde emi uche m
ha bụ, na enweghị gị na isi ike,
Amakwaghị m ihe m ga-eme nha dị otu a.
Ahụtụbeghị m onwe m ma e wezụga esemokwu;
nke nka bu agha ha abali na ehihie,
na ha kwenyere na mmebi m.
Sonnet VII - Onye tufuru ọtụtụ ihe tufuru ọzọ ...
Emefula ndị furu efu nke ukwuu,
ezu, ihunanya, ihe emere m;
iji chebe m n’ihe ị chọrọ.
Achọwo m ụlọ nsọ gị na mgbidi ya mma. +
nke uwe miri emi nke eji achọ nma,
dika o si eme onye gbapuru ugbua
Free oké ifufe nke a hụrụ m
Aụwo m iyi na agaghị m abanye ọzọ,
n'ike m na nkwenye m,
na nsogbu ozo di otua, dika ihe efu.
Ma ihe na-abịa agaghị m enwe ike iji;
ma n’ime nke a anaghị m emegide iyi ahụ;
na o dighi ka nke ndi ozo ma obu na aka m.
Sonnet XIV - Dị ka nne dị nro, na nhụjuanya ...
Dị ka nne dị nro, na nhụjuanya
nwa ji anya mmiri na-ajụ ya
ihe, nke na-eri nri
ọ maara na ihe ọjọọ ọ na-eche ga-ehulata,
na ịhụnanya dị nsọ anaghị anabata ya
nke ahụ na-atụle mbibi nke na-eme
ihe ọ gwara ya ka o mee, ọ gbaa ọsọ,
mee ka mkpu ákwá ma belata ihe mberede ahụ,
ya mere echiche m na-arịa ọrịa
na na mmebi ya ọ na-ajụ m, m ga-achọ
wepụ mmezi a na-egbu egbu.
Ma jụọ m ma kwaa ákwá kwa ụbọchị
nke mere na m kwenyere na ihe ọ chọrọ,
echefu chioma ha na nkem.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Abụọ » Garcilaso de la Vega. 5zọ XNUMX kachasị mma iji cheta ya
Carlos Arniches. Nna ukwu nke farce na acid ọchị.